नाडा अटो शोमा नयाँ कुरा जान्न पाइन्छः दुलाल
Posted: 2018-09-08 21:04:29
यही भदौ २६ गतेदेखि राजधानीमा सवारी साधनहरूको कुम्भ मेला ‘नाडा अटो शो’ सुरू हुँदैछ।
भृकुटीमण्डपमा ५ दिनसम्म चल्ने १३ औं नाडा अटो शोमा विभिन्न कम्पनीका सवारी साधन, सवारी सुरक्षा प्रविधि, टायर, लुब्रिकेन्ट्स्, स्पेयर पार्टस्, नयाँ प्राविधि, ब्याट्री, ग्यारेज उपकरण तथा अन्य एसोसेरिजहरू राखिने आयोजकले जनाएको छ।
मेलाकै सेरोफेरोमा नाडा अटोमोवाइल एशोसिएशनका कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
नाडा अटो शो सुरू हुन केही दिन मात्र बाँकी छ, तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
नाडा शोको तयारी भव्य रूपमा भइरहेको छ। स्टलहरू बनिरहेका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। १९ वटा ४ पाङ्ग्रे, २० वटा २ पाङ्ग्रे, ३२ वटा स्पेयरपार्टस्, लुब्रिकेन्ट तथा टायर कम्पनीहरूको सहभागिता रहनेछ। कुल ७१ वटा कम्पनीका झण्डै १३४ स्टल रहने छन्। सरसफाइ हुँदैछ। पार्किङ बन्दै छ। तयारी पूरा हुनै लाग्यो।
यो वर्ष विद्युतीय सवारी साधन प्रमुख आर्कषण हुन्छन्। नाडा शो जहिले पनि नयाँ नै हुन्छ किन भने यहाँ नयाँ गाडी लन्च हुन्छ। डिस्काउन्ट हुन्छ। नयाँ अफर तथा स्किम हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक वर्षको नाडा अटो शो नयाँ हुन्छ नै।
नाडा अटो शोको मुल उद्देश्य व्यापार मात्र नभइ सूचना दिने, रिसर्च गर्ने, जनचेतनाको कार्यक्रम गर्ने पनि हो। योसँगै हाम्रो व्यवसाय प्रवर्द्धन हुनेमा पनि दुई मत छैन। व्यवसायको प्रवर्द्धन भएपछि स्वतस् देश विकास हुन्छ।
तपाईंहरूलाई स्टल पुर्याउनै हम्मे हम्मे पर्यो रे नि?
हो, हामीलाई भृकुटीमण्डप एकदमै सानो भएको छ। ठूला कार्यक्रमहरू गर्न ठाउँको अभाव छ। यो कुरामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको शो गराउन ठाउँ नहुनु हामी सबैको दुर्भाग्यको कुरा हो। यही शोको लागि हामीले भारतबाट एउटा डोम ल्याएका छौं। अरु धेरै स्टलहरूको डिमाण्ड आएको थियो तर त्यहाँ एउटा पनि स्टल थप्न सक्ने स्थिति छैन। त्यही भएर केही साथीहरूलाई स्टल पुर्याउन सकिएन।
हेभी इक्युप्मेन्ट र नाडा शोलाई सुरूदेखि नै साथ दिएका बैंक, बीमा कम्पनीलाई पनि यस पटक समावेश गर्नु भएन भन्ने छ त?
विगतका वर्षमा हेभी इक्युप्मेन्ट, बस, ट्रकहरूका स्टल पनि राख्ने गरेका थियौं। यो वर्ष त स्पेयर पार्टसहरूलाई नै ठाउँ नपुग्ने अवस्था आयो।
हेभी इक्युप्मेटका साथीहरूले ठाउँ अभाव छ भने हामीलाई स्टल पर्दैन भन्नु भयो। उहाँहरूले समस्या बुझिदिएकाले धन्यवाद दिन्छौं।
त्यस्तै बैंकसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ। फाइनान्सको सबै काम कार्यालयबाटै हुने भएकाले उहाँहरूले त्यहाँ बसेर कार्ड बाँड्ने मात्र हो। त्यसकारण यसपटक उहाँहरूलाई समावेश गराउन सकिएन। मूल समस्या भनेको ठाउँको अभाव नै हो।
अटो व्यवसायीहरूलाई एउटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको हल बनाउन ठूलो कुरा त होइन नि ?
सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए वा भृकुटीमण्डपलाई नै बढाउने सरकारले योजना ल्यायो भने हामी बनाउन सक्छौं। नाडा तयार छ। सरकार तयार हुनुपर्यो। भृकुटीमण्डपमै पछाडिको जग्गा खाली छ। भक्तपुरमा पनि एउटा ठाउँ छ। चोभारमा पनि ठाउँ छ।
पहिले पहिले सीमित व्यवसायी मात्र नाडा शोमा हुन्थे, यो संस्करणसम्म आइपुग्दा ठाउँ पुर्याउन कठिन छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
नाडा शो एउटा ब्रान्ड बनिसकेको छ। व्यवसायीहरूले नाडा शोमार्फत् आफ्ना उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु नै हाम्रो गर्वको विषय हो।
यो अटो शोमा कति अवलोकनकर्ता आउँछन् भन्ने आशा गर्नुभएको छ?
हामीले ६० हजार भन्दा धेरै दर्शकले अवलोकन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं।
तपाईंहरूले नाडा शोको टिकट शुल्क १५० र २०० राख्नु भएको छ, किन यति महँगो ? पैसा नभएकाहरूले अवलोकन गर्नै नपाउने?
टिकटबाट पैसा कमाउ भन्ने हाम्रो सोच होइन। टिकटै किन्न नसक्नेले पनि अवलोकन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भित्री इच्छा हो। तर हाम्रो ठाउँ निकै सानो छ र अवलोकनकर्ताको संख्या अत्यधिक छ। चाप नियन्त्रण गर्न टिकट शुल्क १५० र २०० राखेका हौं।
नाडा शोमा केका लागि अवलोकनकर्ता बढी आएको पाउनुभएको छ?
धेरैजसो अवलोकनकर्ता अटोमोबाइलको ज्ञान लिनको लागि आउनु हुन्छ। कतिपय ग्राहक अटो शोमा छुट पाइन्छ भनेर आउनु हुन्छ। मेचीदेखि महाकालीसम्मका ग्राहकले गाडी किन्दा छुट हुने भएकोले नाडा शोमार्फत् बुकिङ गर्ने गरी आउनु हुन्छ। कतिपयले त २र४ महिना पर्खेर भए पनि नाडा शोमा गाडी किन्ने गर्नुभएको छ।
खासमा भन्नु पर्दा सम्भावित ग्राहक, भविष्यका ग्राहक, तुरुन्त खरिद गर्ने र केही जान्न चाहने अवलोकनकर्ता आउने गरेको पाएको छु।
अन्तिममा अटो शोको बारेका केही भन्नु छ ?
हामीले निकै मेहेनत गरेर नाडा शोको तयारी गरेका छौं। नाडा शो अवलोकन गर्दा केही न केही नयाँ कुरा जान्न सकिन्छ। हामी अवलोकलकर्तालाई जानकारी दिन चाहन्छौं र उहाँहरूको सुझाव लिन चाहन्छौं। नाडा शो हेर्न आउने दर्शकले निराश भएर फर्कनु पर्दैन।